Mucaaradka oo ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo inuu labada Aqal kala hadlay muddo kororsi - Jowhar Somali news Leader
Home News Mucaaradka oo ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo inuu labada Aqal kala hadlay muddo...
Mucaaradka oo ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo inuu labada Aqal kala hadlay muddo kororsi
Hoggaamiyaha Mucaaradka ee Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ku eedeeyay Madaxweyne Farmaajo in Guddoonka labada Aqal uu la sameeyay wadaxaajood ku saabsan muddo kororsi labo sano ah.
“Waxaan ogaanay in Madaxweynuhu uu wada-xaajood la sameynayo Guddoomiyeyaasha labada Aqal si loo helo muddo kororsi 2 sano oo loogu kordhiyo dhammaan hey’adaha oo dhan”ayuu yiri C/raxmaan C/Shakuur oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
C/raxmaan C/shakuur oo sii hadlayay ayaa yiri “Marnaba aqbalimayno isaga ama Golayaasha inay sii hayaan xukunka, iyagoo muddo xileedkooda dhamaaday Waxaa u harsan yahay 11 bilood halka waqtiga baarlamaanku uu dhacayo bisha Oktoobar”
Waxaa uu sheegay in haddii doorasho la isku raacsan yahay la hirgelin waayo muddo 8 bil gudahood inay ku qasbanaan doonaan in shacabka Soomaaliyeed u soo bandhigaan doorasho kale.
“Waxaan rajeyneynaa in doorasho la isku raacsan yahay lagu hirgalin karo muddo 8-da bilood. Haddii kale, waxaan ku qasbanaan doonnaa inaan u soo bandhigno Shacabka Soomaaliyeed qaabab doorasho oo kale Waxaan Alle ka baryeynaa in xaaladaas nagu qasbin”ayuu yiri Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir.
Madaxweyne Farmaajo ayaa muddo xileedkiisa sharciga waxaa uu ku egyahay 8 February ee sanadka soo socda 2021, waxaana illaa hadda cadeyn nooca doorasho ee dalka dhici kara, maadaama heshiis siyaasadeed aysan ka gaarin dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada sharcigii doorashooyinka Qaran ee dhowaan ay ansixiyeen labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka.